Ukuphonononga iiProsesa kunye neNgxelo yeziCwangciso zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili - Ukungcwaba Nokutshiswa
Ukuphonononga iiProsesa kunye neNgxelo yeziCwangciso zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili
Ukuqonda ngcono ukulunga kunye nokubi kweeplani zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili kunokukunceda ekwenzeni isigqibo esifanelekileyo malunga namalungiselelo okuphela kobomi. Ukuba unexesha elinzima lokuthatha isigqibo, qiniseka ukuba uthetha nomntu omthandayo omthembileyo oya kuba nomdla kakhulu kuwe.
Iinkonzo kunye neengozi zeziCwangciso zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili
Izicwangciso zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili zibonelela ngezibonelelo ezinokubonakala zinomtsalane, nangona kunjalo kukwakho umngcipheko obandakanyekayo ekuhlawuleni isicwangciso somngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili. Kubalulekile ukuba uqonde ngokupheleleyo ukulungelwa kunye nokubi kwesicwangciso somngcwabo ohlawulelwa ngaphambi kokuba wenze isigqibo.
Iinkonzo zokuba neSicwangciso soMngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili
Iinzuzo zokuba nesicwangciso somngcwabo ohlawulelwa kuqala zibandakanya:
Unokwenza amalungiselelo omngcwabo ngaphandle kokuwushiya kumntu omthandayo
Utshixa ixabiso elinokunyuka kwixesha elizayo
Khetha eyakho indawo yamangcwaba
Ngamana unganciphisa abo ubathandayo kuxinzelelo xa kufikwa ekucwangciseni nasekuhlawuleni umngcwabo wakho
Umvuzo wokuba neSicwangciso soMngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili
Ububi bokubhatala kwangaphambili isicwangciso somngcwabo:
Ikhaya lokungcwaba linokuphuma kwishishini, kwaye awunakufumana mbuyiselo.
Izicwangciso zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili zinokwahluka kwaye zingabinakho ukuguquguquka ngokokukhetha okanye ukuhambisa izicwangciso.
Ukuba utshintsha ingqondo yakho malunga nawo nawuphi na umba wesicwangciso sakho somngcwabo, ngekhe ube nakho ukutshintsha izicwangciso zakho esele zenziwe.
Ukuhlawulela kwangaphambili isicwangciso somngcwabo kunokuba kubiza kakhulu kwaye kunokuba yinto engeyomfuneko ukuba umntu oza kufumana isibonelelo uza kufumanaizibonelelo zokufangokusebenzisa ipolisi yeinshurensi yobomi okanyei-inshurensi yokungcwaba.
Ngaba izicwangciso zomngcwabo ohlawulelwa zangaphambili zilungile?
Ehlawulwe kwangaphambiliiiplani zomngcwaboziingcamango ezintle kwiingcamango; Nangona kunjalo, ukuba utshintsha ingqondo, awunakungcwatyelwa kwindawo enye, okanye ukuba umngcwabo uphumile kwishishini, usengozini yokuphulukana nayo yonke imali oyihlawule kwangaphambili. Oku akunakuchaphazela wena kuphela, kodwa kunokuba nefuthe elibi kumxhamli wakho oya kuthi emva koko abe noxanduva lokuhlawula umngcwabo wakho.
Yimalini indleko zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili?
Ehlawulwe kwangaphambiliiindleko zomngcwaboUluhlu lwamaxabiso abo. Izicwangciso ezininzi ziwela phakathi kwe- $ 10,000 ukuya ngaphezulu kwe- $ 25,000, nangona kunjalo amaxabiso aya kwahluka ngokuxhomekeka ekubeni zeziphi iinkonzo ezifakiweyo kwaye azifakwanga.
Kwenzeka ntoni ukuba iSicwangciso soMngcwabo weNkampani yakho siya eBust?
Ukuba ikhaya lokungcwaba apho uthenge isicwangciso somngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili alisebenzi, usengozini yokuphulukana nayo yonke imali oyibeke emngcwabeni wakho. Ukuba sele udlulile emhlabeni, usapho lwakho luya kushiyeka luhlawule umngcwabo, kwaye imali ekusenokwenzeka ukuba ibisiya kumxhamli wakho ngekhe ibuyiswe likhaya lomngcwabo.
Sesiphi iSicwangciso soMngcwabo esona siPhambili?
Ukukhetha isicwangciso somngcwabo sisigqibo sakho, ke ngokokufanelekileyo, oko kuya kuxhomekeka kwiimfuno zakho ezizodwa. Qiniseka ukuba ukhetha ukuthenga isicwangciso somngcwabo obuqonda ngokupheleleyo bonke ubungozi kunye nezibonelelo zokwenza njalo.
Yintoni engabandakanywanga kumngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili?
Izicwangciso zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili zenziwe ukuba zibandakanye kwaye zikhuphe nantoni na onokuyithanda malunga nomngcwabo wakho.
Ngaba Imingcwabo Ehlawulelwa Phambili Ixabisekile?
Izicwangciso zomngcwabo ohlawulelwa kwangaphambili ziyingozi, ngakumbi xa kukho ezinye, iindlela ezikhuselekileyo ezikhoyo xa kuziwa ekudaleni ifayile yakhoizicwangciso zokuphela kobomi. Ekugqibeleni, kuxhomekeke kuwe ukuba sithathe isigqibo sokuba yeyiphi eyona nto ilungele wena.
Imithetho Imiba Ye Babhali Malunga Ukudibanisa Iphepha Lamaxabiso Antique Abafazi Ishishini Impahla Ezantsi Carb
indlela yokutsala indoda ye-capricorn
uxolo ngokulahleka kwenja yakho
ungasusa njani amabala ezingubeni
ungasusa njani ukungunda kuphahla lwendlu yangasese
Imidlalo yamakhadi yokudlala yodwa ngaphandle kwesolitaire
ungasusa njani ukungunda kwesikhumba kwiimpahla ezinemibala